कर्णाली प्रतिष्ठानमा चार रोगको विशेषज्ञ सेवा थप - Action Khabar - Nepali Online News Portal
कर्णाली प्रतिष्ठानमा चार रोगको विशेषज्ञ सेवा थप
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले विशेषज्ञ सेवा थप गरेको छ । प्रतिष्ठानले छाती, स्नायु, नाक, कान, घाँटी सेवा र छाला रोगको विशेषज्ञ सेवा थप गरेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. रमेश भट्टराइले जनाएका छन् ।
प्रवक्ता डा. भट्टराइका अनुसार विगतमा यी सेवाहरु कर्णाली प्रतिष्ठानमा थिएनन् । थप चारवटा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरेसँगै कर्णालीबासीले नाक, कान, घाँटी, स्नायु, छाती र छाला रोगको उपचार जुम्लामै हुने छ। ‘यी रोगको सेवा प्रतिष्ठानमा नहुँदा महंगोमा उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता थियो, अब कर्णालीमै यो रोगको उपचार हुन्छ। ढुक्क भएर उपचार गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदैछ।’ डा. भट्टराईले भने ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस, बीएनएस, ब्याचलर इन क्लिनिकल न्युट्रेशन बिषयहरुको निरीक्षण भएर सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। शिक्षक, आवास, कक्षाकोठा, अस्पतालदेखि चेरे चौर सम्मको बाटो व्यवस्थापन, आधारभुत साइन्स भवन निर्माणका लागि सम्झौता भई काम शुरु भइसकेको छ। अहिले स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रमको कोटामा पाँच जना भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन्।
प्रतिष्ठानमा केही समय अगाडी मात्रै उपकुलपति भएर गएका डा. मंगल रावलले प्रतिष्ठानलाई प्रदेशकै गौरबशाली स्वास्थ्य संस्था बनाउने दिर्घकालिन रणनीति बनाएका छन् । कोरोना संक्रमणको पहिलो भेरियन्टमा उत्कृष्ठ सेवा दिएको प्रतिष्ठानले दोश्रो भेरियन्टमा पनि सोहि अनुरुप सेवा दिइरहेको छ । दोश्रो भेरियन्टमा कर्णालीका चिकित्सकले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा गएर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानको भर्खरै सम्पन्न सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानको बजेट अनुमोदनका साथै रिक्त रहेका सभा सदस्य, प्राज्ञिक परिषदको सदस्यहरुको नियुक्ती गरेको छ ।
- १० जेष्ठ २०७८, सोमबार २३:०४ मा प्रकाशित